2 Korinte 12:21
hleze ndithi, ndakufika kunjalo, andithobe uThixo wam phakathi kwenu, ndize ndikhedame ngenxa yabaninzi ababesebonile, abaguquka ekungcoleni, nasembulweni,naseburheletyweni ababenzayo.
Ke zibaleke iinkanuko zobutsha; phuthuma ke ubulungisa,ukholo, uthando, uxolo nabo bayinqulayo iNkosi ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo.
kodwa masibabhalele ukuba bazikhwebule kwizingcoliso zezithixo, nombulo, nento ekrwitshiweyo, negazi.
Bhubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni: umbulo,ukungcola, ukuthabatheka okuhlazisayo, inkanuko embi, nokubawa,okuyinkonzo yezithixo kona oko;
Ke umbulo, nako konke ukungcola, nokubawa, makungakhe kukhankanywe phakathi kwenu, njengoko kubafaneleyo abangcwele;
Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile: ukrexezo,umbulo, ukungcola, uburheletyo,
1 Korinte 6:18-19
 Wubalekeni umbulo. Zonke izono athe umntu wazenza,zingaphandle komzimba; ke lowo wenza umbulo, wona owakhe umzimba. Anazi na, ukuba umzimba wenu uyitempile yoMoya oyiNgcwele ongaphakathi kwenu, eninaye evela kuThixo; nokuba ke aningabenu?
1 Korinte 7:2
Kodwa ke, ngenxa yoomibulo, elowo makabe nowakhe umfazi,athi elowo abe neyakhe indoda.
1 Korinte 10:13
Anibanjwanga silingo singesesabantu. Uthembekile ke uThixo, ongayi kuvumela ukuba nilingwe ngaphezu kweninako;owothi, kunye nesilingo eso, avelise ithuba lokuphuma kuso,ukuba nibe nako ukuthwala.
1 Petros 2:11
Zintanda, ndiyanivuselela njengabaphambukeli nabasemzini,ukuba nikhumke ezinkanukweni ezizezenyama, zona ziwuphumele umkhosi umphefumlo.
Njengokuba iSodom neGomora, nayo imizi engakuyo, yenza kakhulu umbulo ngohlobo olufana nolwazo ezo, imka ilandela nyama yimbi, ibekwe ekuhleni ukuba ibe ngumqondiso, iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade.
Banoyolo abahlambulukileyo intliziyo; ngokuba baya kumbona uThixo bona.
Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi; Ngumfazi owoyika uYehova yedwa oya kudunyiswa.
Ndiyanivuselela ngoko, bazalwana, ngeemfefe zikaThixo,ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo,elingcwele, elikholekileyo kuThixo: inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni.
Masihambe sizibekile ngokwasemini; kungabi sezindywaleni nasekunxileni; kungabi sekuphimiseni naseburheletyweni; kungabi sezinkanini nasemoneni.
 Kuba oku kukuthanda kukaThixo, ukungcwaliswa kwenu, ukuba nikhumke kulo uhenyuzo; ukuba elowo kuni akwazi ukusizuza asiphathe esakhe isitya enobungcwalisa, enembeko;
 Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile: ukrexezo,umbulo, ukungcola, uburheletyo, ukubusa kwizithixo, ukukhafula, intiyo, iinkani, amakhwele,imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukano, oomona, ookubulala, ookunxila, iindywala, nezinto ezinjengezo; endinixelelayo ngenxa engaphambili, njengokuba besendinixelele kade, ukuba abazenzayo izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.
 Kwathi emveni kwezi zinto, umfazi wenkosi yakhe waphosa amehlo akhe kuYosefu, wathi, Ndilale. Wamangala, wathi kumka-nkosi yakhe, Yabona, inkosi yam ayikhathalele nto ikum isendlwini, nezinto zonke enazo izinikele esandleni sam. Akukho bani mkhulu kum kule ndlu; ayinqabisanga nento le kum, nguwe wedwa, ngokokuba ungumkayo; ndingathini na ke ukwenza obu bubi bukhulu kangaka, ndone kuThixo? Kwathi, nakuba ebethetha kuYosefu imihla ngemihla,akamphulaphula yena ukuba alale ecaleni lakhe, nokuthi abe naye.